‘चिन्ताजनक’ चिन्तन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १६, २०७४ गुरुङ सुशान्त
काठमाडौं — समयले मोहक इन्द्रेणी पहिरिएर पुँजीवादी बजारमा उन्मत्त नृत्य गर्न थालेपछि विचारविहीन लेखकहरू लामबद्ध रमितेजस्तै ताली पिट्न थाल्छन् । ती लेखक क्षणिक शब्दजालको भुलभुलैयामा उफ्रिहाल्छन् ।
कलिला मनमस्तिष्कको गल्लीगल्लीमा पनि कोरस गुन्जिन थाल्छन्, चामत्कारिक प्रभावमा । बजारले हामीलाई नयाँ–नौला झिलिमिली दिन्छ । र, हाम्रा आँखा नाफामा खोसिलान्छ बिस्तारै । जादुई पाउजु दिएर हाम्रा गोडा बन्धक बनाउँछ । तापनि, हामी बेसुरा उत्सवमै रमाइरहन्छौँ । एकएक प्राश्निक प्रतिवादहरू बिरानो देशको श्रमिकजस्तै हुन्छन् । र, मौन शिविरमा कैद हुन्छन् ती ।
बजारको पर्दामा अचेल प्लास्टिकका कानजडित यन्त्रमानवहरू ‘मानवता’ को गीत गाइरहेका छन् । र, अनन्त सिठ्ठी बजिरहेछन् । कोलाहलबीच कहिलेकाहीँ एकाध प्राश्निक बेलुन पनि उड्छन्, जसमा प्रतिरोधी चेत भरिएको हुन्छ । बजारको देब्रे नाकाबाट भर्खरै एउटा बेलुन उडेको छ, ‘भूमण्डलीकरण र साहित्य’ । बेलुनको धागो समातेका छन्, अमर गिरीले ।
कविको फेटा गुथेका गिरीले सार्वजजिक चोक–चौतारीमा सांस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्ध बेलाबेला चोरी औँला उठाइरहेका छन् । आफूलाई विशेषत: भूमण्डलीकरण, बजारवाद, उत्तरआधुकितावाद, सांस्कृतिक आक्रमण र उपभोक्तावादको विपक्षमा उभ्याउँछन् उनी । एकाध पुस्तक उनेर अमर गिरीहरूलाई महान् सांस्कृतिक योद्धाको पगरी गुथाउन थालेमा अतिशय भासमा फसिन्छ । तर, बौद्धिक खडेरीमा ‘भूमण्डलीकरण र साहित्य’ जस्ता वैचारिक रचनाले विमर्शमा चाख लिने पाठक, लेखक र संस्कृतिकर्मीलाई थोरै शीतल बनाउने नै छ । माक्र्सवादी चस्मा लगाउने गिरीको आफ्नै लेखनयात्रामा भने यो पुस्तकले प्राज्ञिक महत्त्व राख्ने कुरामा सन्देह छैन ।
भनिन्छ, हरविधाको आआफ्नै भाषिक शक्ति र सीमा भए पनि कविहरूले गद्यमा पनि कहीँ न कहीँ काव्यिक छटा दिन्छन् । कविताको मैदानमा लामो समयदेखि खेलिरहे पनि गिरीको यस पुस्तकमा काव्यिक स्वाद कहीँ कतै छैन । लाग्छ— विश्वविद्यालयका शास्त्रीय प्राध्यापकको नोटबुक पल्टारहेका छौँ । तापनि, विषयप्रतिको लेखकीय गाम्भीर्यले पुस्तकका पृष्ठमा सिलसिलाबद्ध अघि बढ्न बाध्य हुन्छन्, गम्भीर पाठक । पछिल्लो डेढ दशकदेखि प्राज्ञिक विमर्शको सानो घेरामा गुन्जिरहेका संकथन नै पुस्तकको केन्द्रमा छन् ।
थाहै छ, भूमण्डलीकरणको स्वभाव तरल छ । उँचो भागबाट भिरालोतिर बग्दै जान्छ यो । र, कुनाकाप्चासम्म भिजाउँछ । यही स्वभावको रफ्तारमा अविकसित र अर्धविकसित मुलुकहरूमा अमेरिकाजस्ता देशका भाषा–संस्कृतिको प्रभाव एकोहोरो परिरहेको छ । र, तिनै शक्तिशाली राष्ट्रको हेजेमोनीको विशाल जाँतोमा तेस्रो मुलुकहरू अनाजमा लुकेका घुनझैँ भएका छन् । पुँजीवादी युगको बलियो हतियार नै पैसा र प्रविधि भएका छन्, जसको आडमा साना देशमाथि आफ्नो सांस्कृतिक प्रभुत्व लादिरहेका हुन्छन्, जानी–नजानी । नेपाली समाजको दैनिकी र नयाँ पुस्तामा देखिएको प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्दा पनि हामी प्रस्ट हुन्छौँ, भूमण्डलीकरणको सांस्कृतिक पाटाबारे ।
वैश्वीकरणको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा उत्तिकै बलियो ढंगले परेको हुन्छ । आधुनिक वैश्वीकरणको मूल बाटो नै विश्व अर्थ–राजनीति र बजारको केन्द्रमा जोडिनु हो । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय डिस्कोर्स हो, भूराजनीति । नेपालको भूराजनीतिक ऐतिहासिकता, भूमण्डलीकरण र राजनीतिक–सांस्कृतिक पक्षमा बृहत्तर विमर्शपश्चात् नै सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू निस्कनेछन् । हामी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा गम्भीर सिकार भएको बोध गरेर नै गिरीले भूमण्डलीकरणलाई ‘आजको साम्राज्यवाद’ मानेका छन् । उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘सांस्कृतिक भूमण्डलीकरणले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र उदात्त मूल्यलाई नष्ट गर्दै छ । प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन धरासायी बनाउँदै छ । हामी आत्म विसर्जनको सिकार हुँदै छौँ । यसका विरुद्ध संघर्ष आजको हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।’ तर, यहीँनेर मूल जिज्ञासा ब्युँतिन्छ— गिरीको दृष्टिमा ‘सांस्कृतिक पहिचान’ र ‘उदात्त मूल्य’ के हुन् ? बहुसांस्कृतिक देशमा पछिल्लो समय उछालिएको ‘राष्ट्रवाद’को भाष्य र ‘सांस्कृतिक पहिचान’ लाई एकसाथ चिरफार नगरिए गिरीहरूले इंगित गरेको ‘उदात्त मूल्य’ जराविहीन अमूर्त लहरा मात्र ठहरिदिन्छ । स्वरूप र विधि स्पष्ट नपार्दा ‘संघर्ष’ पनि बनावटी मुस्कानजस्तो क्षणिक हुन्छ । ‘भूमण्डलीकरण र साहित्य’ पनि यी विषयमा मौन छ ।
पछिल्ला दशकमा संस्कृति र साहित्यको हातामा जोडजोडले होहल्ला गर्ने वाद हो, उत्तरआधुनिकतावाद । कहिलेकाहीँ लाग्छ— तोडले चिच्याएर गाए पनि प्रस्ट नबुझिने ‘अन्डरग्राउन्ड म्युजिक’ हो, उत्तरआधुनिकतावाद । नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिकतालाई प्राज्ञिक व्याख्या गर्ने गम्भीर अध्येताहरूमध्ये अग्रणी समालोचक कृष्ण गौतम ‘खेलाँचीको शक्ति प्रदर्शन’ ठान्छन्, उत्तरआधुनिकतालाई । क्वाँटी स्वादमा रमाउने यस वादले समाजको याथार्थिक चित्रणभन्दा भ्रम र लीलाको जञ्जालमा लगेर पाठकलाई बेवारिसे छोडिदिन्छ । र, आफू पनि अनिश्चयको सुरुङमा हराइजान्छ । जटिल प्रयोगमा नाच्ने निरर्थक शाब्दिक भुमरीलाई नै यसको विलक्षणता मानिदिए हुन्छ । साठीको दशकमा नेपाली साहित्य–संस्कृतिको विमर्शात्मक चुल्होचौकोमा रजगज गरेको उत्तरआधुनिकतावादी स्वर अचेल मलीन भएको आभास हुन्छ । यसका केही अर्थपूर्ण कारण छन् ।
संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशमा दलित सौन्दर्य, जनजातीय संस्कृति, सवाल्टर्न/सीमान्तीकृत/किनारीकरणका आवाजजस्ता उदाउँदो बहसलाई समेट्न खोज्ने नेपाली उत्तरआधुनिक चिन्तकहरू आन्दोलनको निर्णायक घडीमा मौनताको गुफा पसिदिए । र, उत्तरआधुनिकतावाद छलनाको बैंसालु कुहिरो मात्र रहेको पुष्टि पनि गरिदिए । माक्र्सवादविरोधीको रुपमा आलोचित उत्तरआधुनिकतावादलाई अमर गिरी ‘आजको साम्राज्यवादको वैचारिक हतियार’ ठान्छन् । उत्तरआधुनिकतावादलाई विचार, कला र इतिहासविरोधी अराजकतावादी धारणाको रूपमा चित्रण गर्दै गिरी लेख्छन्, ‘अनेकान्तवादी उत्तरआधुनिकतावादले अन्तत: विसर्जनको बाटोतर्फ लिएर जान्छ, जसले पुँजीवादको वर्चस्वलाई सघाउँछ । यसले स्वतन्त्रता दिँदैन, बन्धनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्दछ । सारमा यो शून्यवादी छ ।’ परम्परावादी संरचनाविरुद्ध हुने सिर्जनशील अराजकतालाई त पाठकले प्रेम गरिरहेकै छन्, साहित्यमा । तर, शून्यवादको भीरतिर धकेल्ने नियतको अराजकतासँग गिरीजस्ता संस्कृतिकर्मीहरूलाई झोंक चल्नु भने मनासिब लाग्छ ।
‘भूमण्डलीकरण र साहित्य’ लाई साक्षी राखेर प्रगतिशील वैचारिकीमाथि अनेक बहस–शृङ्खला बढाउन सकिन्छ । यो नै सबल पक्ष हो, पुस्तकको । साहित्य र कला फगत मनोरञ्जनका लागि हो या उत्तरदायित्वपूर्ण कर्म पनि हो ? यो प्रश्नको मियोमा घुम्दा गिरी साहित्यलाई सांस्कृतिक दायित्व ठान्छन् । उनले लेखेका छन्, ‘साहित्यमाथि बजारको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै छ । गहिरो अध्ययन र रचनात्मक विमर्शको ठाउँ सतही अध्ययन र कमजोर
विमर्शले लिँदै छ । यस स्थितिमा गम्भीर समालोचना कर्मले नै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ।’ आफ्नो
हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई प्राज्ञिक स्वरूप दिनलाई उनले यो पुस्तक लेखे सायद । हरेक रचना कुनै न कुनै ‘आइडोलोजी’ को जमिनमा उब्जिएको हुन्छ । भलै, रचनाकार आफैँ वैचारिक रूपमा प्रस्ट नहुन सक्छ । अमर गिरी आफ्नो वैचारिकतामा प्रस्ट छन् । र, सांस्कृतिक अतिक्रमणमाथि चिन्ता पोखिराख्छन्, निरन्तर ।
नेपाली माक्र्सवादी संस्कृतिकर्मीहरूका लागि आकर्षक फेसन भएको छ, ग्राम्स्की । मुसोलिनीको राज्यलाई नै खतरा महसुस गराउन सफल इटालेली कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ ग्राम्स्की विश्वभर नै प्रभावी छन् । ‘प्रिजन नोटबुक’ का विशृंखलित प्रसंग व्याख्या–मण्डलीका अनेक आयाममा कहिलकाहीँे अपख्याख्याको झमेलातिर मोडिन्छ । सांस्कृतिक प्रभुत्व, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सवाल्टर्नसम्बन्धी बहसको जरा खोतल्दै जाँदा बौद्धिकहरू ग्राम्स्की र इटालेली राजनीतिक इतिहासमा पुगेर ठोकिन्छन् । ग्राम्स्कीको विश्वदृष्टि बोध गर्न क्रोचेजस्ता अभिव्यञ्जनावादी साहित्यिक–चिन्तक पनि पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । परम्परागत विश्वविद्यालयीय कक्षाकोठा र माक्र्सवादी चिन्तकको निकै सानो घेराका ‘सेलिब्रेटी’ ग्राम्स्कीलाई अमर गिरीले पनि छोएका छन्, प्रस्ट्याउने भरपूर कोसिस गरेका छन् । तर, ग्राम्स्की–अध्ययनको अपरिहार्यतालाई नेपाली सन्दर्भमा तार्किक पुस्ट्याईं गर्न चुकेका छन् उनी । ग्राम्स्कीका घुर्मैलो किंवदन्तीसँग दूरदर्शन गरेका जिज्ञासुगणका लागि यो पुस्तक प्रवेशद्वार भने
बनिदिन्छ नै ।
पुस्तकमा समेटिएका पछिल्ला दुई लेख अघिल्लाभन्दा कमजोर लाग्छन् । नारीवादी आन्दोलन र साहित्य चिन्तनबारे ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ विवरण त भेला पारेका छन् गिरीले । तर, पूर्वीय समाजमा रहेको लैंगिक विभेदको जग र संरचनामाथि ‘आइडोलोजिकल’ प्रश्न र प्रहारको सर्वथा अभाव छ, लेखमा । जब सैद्धान्तिक मार्गचित्रबारे स्पष्ट हुँदैनन्, तब बौद्धिकहरू अमूर्त कुरा गर्छन् भन्ने सबुत हुन्, यी दुई लेख । नारीवादी आन्दोलनबारे गिरी भन्छन्, ‘सामन्तवाद, पुँजीवादका विरुद्ध चल्ने संघर्षको एक अंगका रूपमै नारी आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित छ र नारी–पुरुष एकताबाटै नारी मुक्तिको सपनालाई पनि सार्थक तुल्याउन सकिन्छ ।’ नारी–पुरुष एकता–आधारको विश्वदृष्टि प्रस्ट नभएमा ‘मुक्ति’ पनि कागजी मजाक मात्र हुनेछ ।
भाषा–साहित्यबारे निचोडमा गिरी भन्छन्, ‘अबको नेपाल इन्द्रेणी नेपाल हुनुपर्छ, सम्पूर्ण भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य भएको नेपाल हुनुपर्छ, वास्तविकतामा अनुभूत गर्न सकिने गरी सबैको साझा फूलबारी बन्नुपर्छ ।’ नेपालको भाषिक ऐतिहासिकता र भाषा–नीति अध्ययन गरेकै छन्, पाका प्राज्ञ गिरीले । तापनि, कुरा चपाउने कुनै चुनावी नेताझैँ ‘हुनुपर्छ–बन्नुपर्छ’ को लयमा कुरा टुंग्याउँछन् उनी । प्रश्न जाग्छ— साझा फूलबारी बन्नुपर्छजस्ता ‘क्लिसे’ वाक्यगठन तानतुन पार्नकै लागि करिब साढे तीन सय पृष्ठको पुस्तक लेख्नैपर्छ ? उदेक लाग्छ, चिन्तकको कलमले चिन्ताजनक ढंगले किन जिब्रो चपाउँछ ? समाधानको बुँदागत मार्गचित्र किन कोर्दैनन् प्राज्ञिकहरू ? समस्या कहाँ छ ?
लेखकको वैचारिक विरोधाभास नै पुस्तकको गाँठी समस्या हो । पहिचानको आवाजलाई उत्तरआधुनिक ‘रिमिक्स’ मात्र ठान्दा रहेछन्, गिरी । भन्छन्, ‘साहित्यमा अभिव्यक्त पहिचानको उत्तरआधुनिकतावादी अवधारणा र चेतनाको रचनात्मक आलोचना माक्र्सवादीहरूको दायित्व हो । माक्र्सवाद वर्गीय मुक्तिसँगसँगै जातीय उत्पीडनको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने ठान्छ ।’ घनघोर सिद्घान्तमा जकडिनु नौलो रूढिवाद हो । यति अन्धता पनि नपालौँ कि सबै विभेदको अन्त्य माक्र्सवादले ‘ठाने’ अनुसार हुन्छ । राम्रो पक्ष उत्तरआधुनिकतावादबाट सापटी लिँदा पनि माक्र्सवाद निचो हुँदैन, बरु गतिशील हुन्छ । वर्गको निर्माणमा वर्णव्यवस्थाको सर्वोपरि भूमिका रहेको इतिहासलाई चिरफार नगरेसम्म बहस घुमिफिरी अमूर्तताको रुम्जाटारमा आइपुग्छ । र, खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’ मा टुंगिन्छ । आन्तरिक रूपमा जातीय तिरस्कार सहेका भुइँ–वर्गले बाह्य सांस्कृतिक आक्रमणविरुद्घ लड्नेबारे कसरी सोच्न सक्छन् ?
नेपाली संस्कृतिको हर पिँढी, आँगन, भात–भान्सामा हिन्दु ब्राह्मणवादीे जरा जकडिएर बसेको यथार्थमाथि आँखा चिम्लिन मिल्दैन, बौद्घिकहरूले । दलित–समुदायमाथिको विभेद र दलनको इतिहासलाई अनेक आदर्शका लेपनले छोप्नु जातिप्रथाको घुमाउरो समर्थन हो । विडम्बना, जातीय मुक्तिको संकथनलाई ‘विखण्डनकारी’ बिल्ला टाँसिदिएर बेवास्ता गरिन्छ । गिरीय पुस्तकको वैचारिक चस्माले पनि ‘वर्ग’ मात्र देख्छ, जाति–व्यवस्थाको बलियो इँटाबाट निर्मित वर्गप्रति आँखा चिम्लिदिन्छ । पहिचानको राजनीतिले विचारधारामा आधारित राजनीतिलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने निष्कर्ष नै असहिष्णु प्रतीत हुन्छ । यस निष्कर्षले हिजोकै जातिवादी ‘हाइरार्की’ लाई टेको दिन्छ । यस्तो टेकोदार धारलाई सजिलोका लागि ‘हिन्दु माक्र्सवाद’ भनी व्यङ्ग्यात्मक आलोचना गर्न सकिन्छ ।
सयौँ वर्षको जातीय उत्पीडनको अन्त्य संरचनागत परिवर्तनपछि मात्र सम्भव छ । जातीय–आर्थिक समानताले मात्र वैश्विक सांस्कृतिक आक्रमणविरुद्ध बोल्ने आँट पलाउनेछ, बौद्घिक नागरिकमा । र, अनेकौँ प्रतिरोधी बेलुन उड्नेछन् । नत्र, एकाध बेलुन उड्लान् कहिलेकाहीँ । बजारका चमत्कारी आकाशमा हराउनेछन्् ती । प्राज्ञिकहरूको हातमा बाँकी रहनेछ– चुँडिएको धागो मात्र ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०८:४८
काठमाडौं — बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दी पिपल’ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ ले कसरी सफलता हासिल गरिरहेको छ भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहंँदा झन्डै १ सय ४० किलोमिटर टाढा थ्यान्जिन सहरको पांँचतारे ‘ग्रान्ड भ्यु होटल’ मा ठीक त्यही विषयको कक्षा चलिरहेको थियो ।
झिनले यस्तो भनिरहँदा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू सीले अधिनायकवादी बाटो पक्रे, उनी चीनलाई
आफ्नो औंलामा नचाउन चाहन्छन्जस्ता विश्लेषण गरिरहेका थिए । तर यसप्रति चिनियाँहरू त्यति परबाह राख्दैनन् । ‘पश्चिमाहरू चीनबारे अलि बढी अफवाह फैलाउन खोज्छन्’ भन्ने चिनियाँहरूले बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरूको विश्लेषणमाथि दिमाग ख्याउने झन्झट गर्दैनन् । उनीहरू केवल आफ्नो आत्मविश्वास प्रकट गर्छन्, झिनले प्रस्तुत गरेको झन्डै चार दशकयताको प्रगतिको तथ्यकथाले त्यसलाई झल्काउँथ्यो ।
अब चीनको मुख्य ध्यान नै कसरी आर्थिक रूपमा पहिलो मुलुक बन्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । यो मामिलामा राष्ट्रपति सी र अन्य नागरिकले बोल्ने भाषा करिब एउटै छ । हरेक विषयको उदाहरण उनीहरू अमेरिकासँंग तुलना गरेर दिन्छन् । २१ दिन लामो यात्राका क्रममा भेटिएका व्यक्ति र कक्षामा आएका स्रोत व्यक्तिहरू कसैले पनि अरू मुलुकको नामै लिएनन्, अमेरिका बाहेक । ‘अमेरिकाले यो गरिरहेको छ’, ‘हामी यो गर्दै छौं’ र ‘यहांँ पुग्छौं’ भन्ने वाक्यांश पटक–पटक दोहोर्‍याइरहे उनीहरूले । त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने बाटो भनेको ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ हो भनी सी विचारधाराको प्रशंसा गर्न झन् उनीहरू कसैले छुटाएनन् ।
पूर्वाधार, व्यापार, आविष्कार, प्रविधिमा चीनले गरेको प्रगतिको प्रमाण आँंखैले देखेपछि उनीहरूका सपना झूटा लाग्दैनन् । चीनका पाँंच ठूलामध्येमा पर्ने सांघाई, बेइजिङ र थ्यान्जिन भ्रमणका क्रममा देखिएका विकास र प्रगति खास छ । चिल्ला फराकिला सडक, गगनचुम्बी भवन, बाहिरबाट हेर्दा झट्ट देखिने विकासका सूचक हुन् । तर ती गगनचुम्बी भवनभित्र भइरहेका काम त्योभन्दा बढी विकसित खालका छन् । ‘थ्यान्जिन इकोनोमिक एन्ड डेभलपमेन्ट एरिया’ (टेडा) त्यस्तै काम गर्ने एउटा क्षेत्र हो । त्यहाँको गगनचुम्बी भवनभित्र मोटर कम्पनीदेखि, जुस फयाक्ट्री, अनलाइन मार्केटदेखि ‘इको सिटी’ सम्म अटाएका छन् । हजारौं व्यक्ति त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेन्टमा बस्ने ती कामदारको सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । सिंगापुर सरकारसँग मिलेर ‘सिनो–सिंगापुर इकोलोजिकल सिटी’ बनाइएको छ । सिंगापुरकै डिजाइनमा बनेको उक्त वातावरणमैत्री क्षेत्रमा कुनै प्रदूषण छैन ।
चीनलाई बुझ्ने नेपाली विश्लेषकहरूले बेलाबखत टिप्पणी गर्छन्, ‘चीन कुनै स्थानमा सियो बनेर छिर्‍यो भने फाली बनेर निस्कन्छ ।’ यो टिप्पणीको अर्थ खोज्न धेरै भौतारिनु परेन । सुहाउँंदो उदाहरण दिने व्यक्ति भेटिए— वाङ काई । एक दिन दुईटा सेसन गरी झन्डै ६ घण्टा लामो कक्षा लिएका यी पाका मान्छेले मोबाइल प्रविधिमा चीनले कसरी प्रगति गर्‍यो भन्ने अनुभव सुनाए । अमेरिकाको ‘मोटोरोला’ कम्पनी कसरी चिनियाँहरूको पोल्टा पुग्यो र अहिले नयाँं चिनियाँ मोबाइल कम्पनीले कसरी प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरे उनले ।
वाङका अनुसार चीनको बजार र सस्ता कामदार देखेर ‘मोटोरोला कम्पनी’ त्यहाँ छिरेको थियो । तर त्यसबेला चिनियाँहरू मोबाइल प्रविधिसंँग अपरिचित थिए । मोटोरोला कम्पनी आएपछि चिनियाँहरूले उसबाट प्रविधि सिक्न पाए । केही युवालाई प्रविधि सिक्नकै लागि अमेरिका नै पठाइयो । मोबाइल कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेपछि मोटोरोला कम्पनीमा काम गर्नेहरू बिस्तारै कम्पनीबाट बाहिरिए । आफैं नक्कल गर्दै नयाँ मोबाइल बनाउन थाले । ‘सुरुमा कपी गरिएका मोबाइलहरूको गुणस्तर राम्रो भएन,’ उनले सुनाए, ‘तर अध्ययन गर्ने र सुधार गर्ने क्रम रोकिएन ।’ नयांँ मोबाइलहरू आउन थालेपछि बिस्तारै मोटोरोलाको बजार खस्किन थाल्यो । सन् २०१३ मा आइपुग्दा त टाटै पल्टिने अवस्था आएपछि मोटोरोला चिनियाँ कम्पनी ‘लेनोभो’ संँग मर्ज भयो । अहिले चिनियाँ मोबाइलहरूले आफ्नै बजार विस्तार गरिसकेका छन् । संसारका अन्य ठूला मोबाइल कम्पनीहरूकै हाराहारीमा पुगेका छन् । ‘अहिले हामी आफैं नयाँ प्रविधि आविष्कार गर्न सक्ने भइसकेका छौं, ‘हुवावे’ जस्तो ब्रान्डले अहिले संसारका धेरै मुलुकमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छन्,’ वाङले भने ।
कुनै बेला एप्पलको आइफोनका लागि चिनियाँहरू मरिहत्ते गर्थे । तर अझ राम्रो फिचर भएका मोबाइल सस्तोमा पाउने भएपछि बिस्तारै आइफोनप्रतिको आकर्षण घटिरहेको दाबी वाङको छ । मोबाइल मात्र होइन, आफूसंँग नभएको प्रविधि अन्यबाट नक्कल गर्ने र त्यसलाई आफ्नो तरिकाले सुधार्दै बजारमा स्थापित हुने यो काइदा वाङबाट सुनेपछि ‘सियो बनेर छिर्ने र ‘फाली’ बनेर निस्कने टिप्पणी साँंच्चै सही लाग्यो ।
इन्टरनेट प्रविधिलाई प्रयोग गरेर डिजिटल कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ । यसले बिस्तारै पुरानो बजार प्रणालीलाई धक्का दिइरहेको छ । चीनको ‘अलिबाबा’ कम्पनी नै त्यस्तो एउटा सफल उदाहरण हो जो अनलाइन व्यापारबाटै धनी बन्ने विश्वका दसवटा धनी कम्पनीहरूमध्ये पर्छ । चिनियाँ सामान बिक्री गर्नका लागि ज्याक माले १९९९ खोलेको ‘अलिबाबा डट कम’ वेब पोर्टलले अहिले अनलाइन व्यापारको साम्राज्य खडा गरिरहेको छ । कुनै बेला चिनियाँहरूलाई अंग्रेजी सिकाउने यी दार्शनिक गुरुले अमेरिका पुगेपछि चिनियाँ सामान बिक्री गराउने ‘आइडिया’ अनुसार यो वेबसाइट खोलेका थिए । एउटा कोठाबाट सुरु गरेको उनको व्यापारको सञ्जाल संसारका झन्डै २०० मुलुकमा पुगिसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मासिक झन्डै ५५ करोडभन्दा बढी मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइनमार्फत् अलिबाबासंँग कारोबार गर्छन् । राम्रा सामान उत्पादन गर्नेबित्तिकै कम्पनीहरू ‘अलिबाबा’ संँग पुग्छन् र किन्न चाहने ग्राहकहरू पनि मोबाइलको कि प्याडमा औंला दबाउँदै सम्पर्क गर्छन् ।
व्यस्त जीवनशैली र गुणस्तरीय सामान खोज्ने मानिसलाई ‘अलिबाबा’ को जस्तो अनलाइन कारोबारले सजिलो बनाइदिएको छ । अलिबाबा त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता धेरै कम्पनी चीनमा चलिरहेका छन् । प्रविधिसंँगै विकसित नयांँ बजार प्रणालीले पुरानो बजारलाई चाहिं धक्का दिने हो कि भन्ने चिन्ता भने चिनियाँहरूमा देखिन्छ । ‘अलिबाबा’ जस्ता अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीहरू फस्टाउँदै जाँंदा त्यसको सीधा असर पुरानो बजार प्रणालीअनुसार चल्ने ठूल्ठूला ‘सपिङ मल’ हरूमा पर्ने खतरा छ । ‘अनलाइन कारोबारले हामीलाई हौसला बढाएको छ’ वाङ भन्छन्, ‘तर यो बिजनेस बढ्दै जांँदा धेरै मलहरू टाट पल्टिन सक्छन्, बैंकहरूको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ, हामीलाई त्यस्तो पुरानो बजार प्रणालीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने चुनौती छ ।’
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०८:४७